China Furnace Grill Yeiyo Kiln Muviri fekitori uye vagadziri | Judha
Vira remoto Grill reMweya Kiln
Iyo yevira grill ndiyo midziyo yeakapedza lime kuongorora uye kutungamira, uye yevira muviri muviri mweya.
8. choto gomo hurongwa
Lime rakapedzwa rinopfuura nepahwindo remoto pasi pechiitiko chegiravhiti, zvidimbu zvidiki zvinowira zvakananga paguruva hopper, iwo makuru mairi anogara kunze kwegomo remoto, chengetedza pombi yemoto, ita chokwadi chekupa kweoksijeni, inogona kudzora otomatiki kumhanya kwe chigadzirwa chakapedzwa muvira, uye chiri chekubatsira zvikuru kune yakatsetseka pamusoro, goho repamusoro uye kupisa mafuta.
Kana saizi yemarara isina kuenzana, musiyano wacho wakanyanya kana kusachena kuri kuwanda, zvinhu zvemuvira zvadzimwa muvira, zvichikonzera kusagadzikana kwemweya, nzvimbo isina kugadzikana yecalcining, yakanyanya kupisa, zvichikonzeresa bundu rakakura remoto. Kana saizi yemarasha isina kusvika pamwero uye saizi yediki iri diki kwazvo, kupisa kwacho hakuna kukwana kana nzvimbo yekuverenga iri CaCO3 yaora, izvo zviri nyore kukonzera kutema. Kana iyo saizi yakakura iri yakanyanyisa kukura uye iyo inotonhorera nzvimbo ichiri kupisa, iyo ore kubuda tembiricha yakanyanya kukwirira, iyo inopambadza mafuta uye inoita kuti zvive zvakaoma kuburitsa dota. Pasina anokwanisa uye akatsiga mbishi zvinhu, mafuta, haigone kuburitsa anokwanisa zvigadzirwa, saka neanokwanisa mafuta sehwaro, pamwe nehunyanzvi hwemberi, kuona mhando yemhando yezvigadzirwa.
Hunhu zvimiro zvechimbichimbi:
Iyo yakajairwa chiyero cheiriimu mhando ndeye: calcium oxide zvemukati, isina-kutsva chiyero, pamusoro-kutsva chiyero, chiitiko dhivhosi, zvinokuvadza zvigadzirwa zvemukati, nezvimwewo, asi zvinotonyanya kukosha, maindasitiri akasiyana, mashandisirwo akasiyana ane akasiyana mwero. Semuenzaniso, calcium carbide indasitiri inosimbisa pachiitiko cheanyoro dota, nepo indasitiri yedare ichisimbisa pane simba, saka zvinodikanwa kupisa rakaoma lime, nepo indasitiri yesimbi ichisimbisa pane yakapfava lime .Saka indices dzayo dzakasiyanawo Kazhinji, zvirimo zvecalcium oxide mune yakajairwa. quicklime inofanirwa kunge iri pamusoro pe97%, mwero weusina-kutsva mwero uye mwero wekupisa-pamusoro unofanirwa kunge uri pasi pe10%, uye calcium inoshanda ingori pamusoro pe300mi.
Pashure: Judha Kiln-Round ndiro mana-mativi anosunungura
Zvadaro: Juda Calcium hydroxide yekugadzira mutsara (isina slag kubuda system) -EPC Project
Kiln Muviri Simbi Gungano
7. kiln system Kiln main mamiriro: furna muviri goko resimbi simbi, yakavakirwa zvidhina. Kiln inovhenekera zvinhu ndeiyi: dura rezvinopidigisa zvidhinha Tsvuku chidhinha Iyo aruminiyamu silicate fiber yakanzwa slag Iyo yekugona inokwana ndeye 100-300 matani erimu pazuva. Iyo dhayamita yemoto ndeye 4.5-6.0 metres, iyo yekunze dhayamita ndeye 6.5-8.5 metres, iyo inokwana kukwirira kwevira ndeye 28-36 metres, uye iyo yakazara kukwirira iri 40-55 metres. Rudzi rwemoto mune kuputira, Multi-rukoko kuputira m ...
Maviri Stage Lock Mhepo Valve
10. Mhepo yekuvharira system-Matanho emhepo-ekuvharisa vharuvhu mudziyo: ndeimwe yemaitiro akakosha mukugadzirwa kwelime shaft kiln. Iyo yakazara dota yekubvisa michina ndeyekumisa mweya uye pedza dota, ichi chishandiso ndechekuchengetedza mhepo uye nekuisa chisimbiso padota: mukuita kwekubvisa madota, nekuda kwekutenderera kwekutsemuka kwezvinhu zviviri zvinokanganisa, mweya wekutsva hauzodonhe kubva iyo yepazasi chikamu, icho chinogona kunyatso kuvandudza mhando uye kubuda kweiriimu. chimiro chemidziyo: chishandiso chinoumbwa ...
Karusiyamu Hydroxide Kugadzira Line Equipment, Karusiyamu Hydroxide Equipment, Kugadzira Calcium Hydroxide, Karusiyamu oxide Uye Calcium Hydroxide, Zita Rekutengesa ReCalcium oxide, Karusiyamu Hydroxide Kugadzira,